China LVP otomatiki Mwenje Yekuongorora Mashini (PP bhodhoro) vagadziri uye vanotengesa | IVEN
Auto Chiedza Yekuongorora Machine
Otomatiki anoona ekuongorora muchina unogona kuiswa kune akasiyana mishonga mishonga, kusanganisira hupfu majekiseni, -oma-kuomesa-upfu majekiseni, madiki-vhoriyamu vial / ampoule majekiseni, hombe-vhoriyamu girazi bhodhoro / epurasitiki bhodhoro IV infusion nezvimwewo.
LVP otomatiki mwenje wekuongorora muchina Introduction:
Chiteshi chekuongorora chinogona kumisikidzwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, uye kutariswa kwakanangana kunogona kugadzirirwa mitumbi yakasiyana siyana mune mhinduro, chiyero chekuzadza, kutaridzika uye kuisa chisimbiso nezvimwe.
Munguva yekuongorora kwemukati memvura, chigadzirwa chakaongororwa chakakwenenzverwa kuti chimire panguva yekumhanyisa-kumhanya, uye kamera yekumaindasitiri inoenderera ichitora mifananidzo kuti iwane mifananidzo yakawanda, inogadziriswa neyakaonekwa yekuongorora algorithm yakazvimiririra yakagadzirirwa kutonga kana chigadzirwa chakaongororwa chakakodzera .
Otomatiki kurambwa kwezvisina kukodzera zvigadzirwa. Iyo yese yekuona maitiro inogona kuteedzerwa, uye iyo data inochengetwa otomatiki.
Yakakwira mhando otomatiki yekuongorora muchina inogona kubatsira vatengi kudzikisira vashandi mari, kudzikisira mwenje yekuongorora kukanganisa chiyero uye kuvimbisa varwere 'kuchengetedzeka kwemishonga.
LVP otomatiki mwenje wekuongorora muchina Feature:
1.Automatically pedzisa iyo equidistant kupatsanurwa mumabhodhoro, uye otomatiki kubvisa izvo zvakaremara zvigadzirwa zvinoenderana neye bvunzo mhedzisiro.
Inogona kutenderera bhodhoro kuti iongororwe nekumhanya, izvo zvinokonzeresa kufamba kwezvisina kuchena zvemvura uye zvinobatsira kuongorora.
3.Iyo yekuona imaging musimboti inoshandiswa kuona uye yakanyatsojeka kutonga zvinoonekwa zvekunze nyaya.
4.PLC HMI mashandiro, inobata mhando LCD control panel.
5.Iyo inogona kuona kukanganisa kwemhete, mabhodhoro ezasi matema matema uye mabhodhoro emabhodhoro.
6.Waterproof mamiriro dhizaini inogamuchirwa chikamu, izvo zviri nyore pakuchenesa yakaputsika bhodhoro. Iyo yakaputsika bhodhoro nzvimbo inogona kushambidzwa zvakananga nemvura.
LVP otomatiki mwenje wekutarisa muchina Makomborero:
1.Adopt yakazara servo drive system yekuona yakakwira-inomhanya, yakagadzikana uye chaiyo kushanda uye nekuvandudza mhando yekutora mufananidzo.
2.Fully otomatiki servo kutonga inogadzirisa kukwirira kweiyo inotenderera ndiro kuti iite kutsiva kwemabhodhoro akasiyana siyana eakasiyana maratidziro, uye kutsiva kwezvakatemerwa zvikamu zviri nyore. 8
Inogona kuona kuremara kwezvindori, mabhodhoro ezasi matema matema uye mabhodhoro emabhodhoro.
Iyo software ine yakazara dhatabhesi basa, inochengetedza bvunzo fomula, zvitoro (inogona kudhinda) bvunzo mhedzisiro, inoita KNAPP bvunzo, uye inoziva iyo yekubata skrini yemunhu-muchina kudyidzana.
5.Iyo software ine isingaenzaniswi kuongorora basa, iyo inogona kubereka kuongorora uye kuongorora maitiro.
LVP otomatiki mwenje wekuongorora muchina wehunyanzvi parameter:
50-1,000ml epurasitiki bhodhoro / nyoro PP bhodhoro
Fiber, vhudzi, chena mabhuroko uye nezvimwe zvisingaputsike zvinhu, matema, matema makwapa uye kumwe kuoneka kuremara
Yakamanikidzwa mweya kunwa
Max kugadzirwa chinzvimbo
LVP otomatiki mwenje wekuongorora muchina unoshanda maitiro:
Pashure: 30ml girazi Bhodhoro Sirasi Kuzadza uye Capping Machine yeMishonga
Zvadaro: Ropa Kuunganidza Tsono Assembly Machine
Ampoule Machine À Coudre Singer, Disposable Syringe & Tsono Production Line, Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Ampoule Muchina À Coudre Led, Ampoule Machine À Coudre Bernina,